insert data into database using servlet and jsp — MYSTERY ZILLION
insert data into database using servlet and jsp
December 2014 in Java
insert registration data into database using servlet and jsp in netbeans <example, tutorials> အပြည့်အစုံလေ့လာချင်လို့ ဘယ် Site တွေမှာသွားပြီးလေ့လာရမလဲ...?
January 2015 edited January 2015 Registered Users
ဒီက ညီအစ်ကို က (စိတ်တော့မရှိနဲ.နော်) Google မသုံးတတ်လို.လား ? ကျွန်တော့်ကိုသာ ဒီလိုမျိုး တိုက်ရိုက်မေးခဲ့ရင် ကျွန်တော်လည်း googling လုပ်ပြီး လင့်တွေရှာပေးမှာပဲ ။ ဆိုလိုတာက ကျွန်တော့်ကို လင့်ကူရှာပေးကြပါလား ပေါ့ အဲ့လိုလား ?
ကျွန်တော် ဘယ်ဆိုက် ဘယ်ဆိုက်က နေလေ့လာပြီးလုပ်နေပါတယ် ။ အဲ့တာသူပြောတာနားမလည်လို. (သို.မဟုတ်) သူလုပ်ပြတဲ့အတိုင်း အဖြေမထွက်လို. ဘာများလွဲနေပါလဲ ဆိုပြီးတော့များ မေးရင် ပိုသင့်တော်ပါမယ် လို. အကြံပေးပါရစေ။
ဒီလိုမပြည်.မစုံပဲ မေးရင် လည်း လင့်တောင်ဘယ်လိုရှာပေးရမလဲ မသိဘူး ။ servlet လား version ဘယ်လောက်လဲ 2.5 နဲ.လား 3.0 နဲ.လား ? xml mapping လား Annotation တွေနဲ. mapping လုပ်ချင်တာလား ? java version က6လား7လား ? servlet 3.0 ကိုသုံးချင်တာဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး java7သုံးမှရမယ် ။ NetBean IDE နဲ.လား ? Eclipse နဲ.ပြထားတဲ့ example တွေဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြန်မပြောင်းတတ်ဘူးပေါ့ အဲ့လိုလား ? database ထဲ register လုပ်ချင်တယ် ..... ဘာအမျိုးအစား database လဲ ? Oracle လား .... MySQL လား .... Mongo လား ....... Connection က ဘယ်လိုပုံစံနဲ. ယူမှာလဲ ?
တစ်ခြား DAO tools တွေနဲ.လား simple Java နဲ.ပဲလား ? ......... please describe more detail to get more exact solutions.
Thanked by 1 Unname